Shiinaha Custom boorsada boorsada xafaayad shandado, shirkado, Warshad - Xigasho - Dongguan Zhihao Boorsada Warshadaha Co., Ltd.
Guri > Boorsooyin > Bacda xafaayadda > Bacda xafaayadda
(1) Shandaddan bacda xafaayaddu ka samaysan tahay waa 290T dhar isku-jira oo dhar ah. Dusha sare waxaa lagu daboolay daahan biyaha celiya. Waxay leedahay sifooyin xoog leh oo biyo-sifeyn ah waxayna si wax ku ool ah uga hortagi kartaa roobka inuu ku qoyo gudaha bacda xafaayadda waqti gaaban. Dharkani wuxuu leeyahay astaamo ay ka mid yihiin iska caabbinta iyo dareenka gacmaha oo aad u fiican. (2) 230T twill maro Oxford ah ayaa lagu isticmaalaa gudaha, kaas oo leh xoog is jiidjiid iyo dareen. , Boorsooyinka lagu keydiyo toy-yada, boorsooyinka taangiga caanaha lagu keydiyo iyo bacaha keydinta kuleylka. Dibedda waxaa loogu talagalay boorsooyinka wax lagu kaydiyo ee shaqeynaya, sida boorsooyinka lagu keydiyo boorsada, bacaha lagu keydiyo parasol iyo boorsooyinka keydka tuugga ee looga hortago tuugada (4) Muuqaalka casriga ah iyo nashqadda kartida weyn leh labaduba waa qurux badan yihiin waxayna qaadan karaan waxyaabo badan oo daryeelka carruurta ah.
1. Soo bandhigida alaabada ee boorsada xafaayada:
(1) Shandaddan bacda xafaayaddu ka samaysan tahay waa 290T dhar isku-jira oo dhar ah. Dusha sare waxaa lagu daboolay daahan biyaha celiya. Waxay leedahay sifooyin xoog leh oo biyo-sifeyn ah waxayna si wax ku ool ah uga hortagi kartaa roobka inuu ku qoyo gudaha bacda xafaayadda waqti gaaban. Dharkani wuxuu leeyahay astaamo ay ka mid yihiin iska caabbinta iyo dareenka gacmaha oo aad u fiican.
(2) 230T twill maro Oxford ah ayaa lagu isticmaalaa gudaha, taas oo leh xoog hoos u dhac iyo dareemid.
(3) Bacaha balastarka ee shaqeynaya, sida bacaha lagu keydiyo suufka, boorsooyinka lagu keydiyo dharka, boorsooyinka lagu keydiyo toy, bacaha keydka taangiga budada ah iyo boorsooyinka keydka kuleylka. Dibedda waxaa loogu talagalay boorsooyinka wax lagu kaydiyo ee shaqeynaya, sida boorsooyinka lagu keydiyo boorsada, bacaha lagu keydiyo parasol iyo boorsooyinka keydka tuugga ee looga hortago tuugada (4) Muuqaalka casriga ah iyo nashqadda kartida weyn leh labaduba waa qurux badan yihiin waxayna qaadan karaan waxyaabo badan oo daryeelka carruurta ah.
(5) Waxaa jira marin marin marin haboon oo xagga dambe ah, kaas oo si fudud ula soo bixi kara waxyaabaha hoose ee bacda xafaayadda.
(6) Waxaan u isticmaalnaa jiinyeerka caanka ah ee YKK sida furitaanka shandada boorsada xafaayadda. Jiinyeerkani wuxuu leeyahay xoogaa qaniinyo sare wuxuuna si weyn u wanaajin karaa isku halaynta iyo badbaadada shaqada furitaanka boorsada.
) Waxqabadka kuleylka kuleylka xoogan wuxuu si weyn u dheereeyaa waqtiga kuleylka kuleylka.
(8) Bacda qalalan iyo tan qoyan ee kala-saarku waxay si wax ku ool ah u kala sooci kartaa qalabka qalalan iyo kuwa qoyan, taas oo si weyn uga hortageysa faafitaanka bakteeriyada iyo sumowga waxyaabaha kale ee ilmaha.
(9) Boorsadeena xafaayada ayaa sidoo kale lagu dhex ridi karaa gaariga wax lagu gado si loo yareeyo culeyska hooyada isla markaana ay ugu fududaato hooyadu inay daryeesho ilmaha.
2. Xuduudaha alaabta (qeexitaanada) shandada bacda xafaayada
Dhererka 28cmX Width 20cmX Dhererka 43cm
5. Xirxirida iyo gaarsiinta boorsada xafaayada
(2) Cabirka baakadka ee caadiga ah: 43cm X 28cm X 20cm, waxaan u habeyn karnaa cabirka baakada naqshadeynta iyadoo loo eegayo baahiyahaaga, si loo badbaadiyo xamuulka.
(4) Miisaanka guud ee sanduuqa oo dhan: 8.7Kg.
(5) Miisaanka saafiga ah ee sanduuqa oo dhan: 7.5Kg.
(8) Haddii loo baahdo, waxaan naqshadeyn doonaa baakidhka shandaddan bacda xafaayadda ah iyadoo la raacayo shuruudahaaga.
(9) Haddii aad ubaahantahay shaybaarka shandaddan bacda xafaayada ah, waxaan dooranaynaa inaan hawada kuugu soo dirno.
(3) Waxaan nahay soosaaraha Disney bacaha xafaayadaha iyo boorsooyinka dhabarka, boorsooyinka Wal-Mart iyo alaabada Samsonite. Fadlan ku kalsoonow tayada wax soo saarka.
(5) Waxaan nahay soo saare kafeeyaal Disney iyo boorsooyinka dhabarka, boorsooyinka Wal-Mart iyo alaabada Samsonite. Fadlan ku kalsoonow tayada wax soo saarka.
Calaamadaha kulul: Boorsada xafaayada xafaayada, Shiinaha, soosaarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshad, habeysan, qiimaha, oraahda, keydka